IGothic Thriller 'Broil' isetelwe ukukhutshwa kwe-Okthobha e-US
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	IGothic Thriller 'Broil' isetelwe ukukhutshwa kwe-Okthobha e-US
by UTimothy Rawles Ngamana 1, 2020
by UTimothy Rawles Ngamana 1, 2020 1,063 imbono
Well Go USA Ukuzonwabisa izisa ifayile ye Canadian umdla we-gothic Ukuqhawula eMelika kulo Okthobha.
Ichazwe njengebali “elibonakala ngathi lidala lokuza kweminyaka” Ukuqhawula yeyona nto imnyama kakhulu.
“Emva kwesehlo esinobundlobongela kunye nesifo semesis esingapheliyo, uChance Sinclair (Avery Konrad) oneminyaka elishumi elinesixhenxe uthunyelwe ukuba ayohlala notatomkhulu wakhe (17)UTimothy V. MurphyKwindawo yakhe entle yentaba. Njengokuba efuna ukufumanisa imvelaphi yokwenyani yobutyebi bukatatomkhulu bakhe obunobunkunkqele-kunye nemeko engaqondakaliyo yempilo yosapho eya kwizizukulwana zakudala-unokufumana indlela engaphezulu kunale wayeyicebisile. Ngokukhawuleza kubanjwa phakathi kwamaqela amabini alwayo osapho, Ithemba lokuphila kuphela linokuvela kumbulali-mqeshi (UJonathan Lipnicki) ngesibetho esihlekisayo sobukrelekrele. ”
U-Edward Drake, umlawuli kunye nombhali-mbhali UBUMBANE Uthi uyabulela kuye wonke umntu osebenze kwifilimu.
"UBUMBANE yenziwa liqela elimnandi laseVancouver kunye neVictoria kunye nabasebenzi, utshilo. “Sithathe izalathiso ezivela Usana lukaRosemary, uMthakathi, Phuma, ukulandelana, uBarry Lyndon, Ulandelayo, kunye nezinye ezininzi ukuzisa UBUMBANE ebomini, libali elixhomekeke ngokupheleleyo kwi-100% kwiziganeko eziyinyani. ”
Umbhali-mbhali uPiper Mars ucacisa ukuba ifilimu nayo ingaphezulu kwebali eloyikekayo. "UBUMBANE Uvavanya iindlela ezenzakalisana ngazo iintsapho. Ndiyathemba ukuba umboniso bhanya-bhanya umema ababukeli ukuba babuze ngemfihlo engeyomfuneko kunye nembambano abanayo ebomini babo. ”
Ukukhutshwa kwedijithali nasekhaya kwezolonwabo Ukuqhawula icwangciselwe u-Okthobha 13, 2020
Ifilimu ikhokelwa ngu-Edward Drake, ebhalwe ngu-Edward Drake kunye noPiper Mars (Umfazi Oselula) kwaye iveliswe nguCorey Large (Ilandela, Indoda kaNovemba).